Umaka: ukusatshalaliswa kokukhishwa kwabezindaba | Martech Zone
Umaka: ukusatshalaliswa kokukhishwa kwabezindaba
IVuelio: Ipulatifomu yakho yobudlelwano beMidiya ne-Influencer
NgoLwesibili, Septhemba 8, 2020 NgoLwesibili, Septhemba 8, 2020 Douglas Karr
Ubudlelwano bomphakathi bushintshe kakhulu ngokuqhuma kwemithombo yezindaba esikhathini sedijithali. Akusekho okwanele ukufaka izitolo ezimbalwa bese uhlanganisa uhlu lwanyangazonke lokukhulunywa ngalo ngomkhiqizo wakho. Namuhla, uchwepheshe wobudlelwano bomphakathi wanamuhla kufanele aphathe uhlu olukhula njalo lwabathonya nezincwadi, bese efakazela umthelela abanawo kumkhiqizo. Isoftware ye-PR iguqukele ekusatshalalisweni kokukhishwa kwabezindaba okulula kuya ekuphathweni kobudlelwano besimanje
Uma ufuna ukuphatha kahle umthwalo wakho wokumaketha, kufanele wenze umsebenzi ongcono wokuhlela usuku lwakho, uphinde uhlole inethiwekhi yakho, wakhe izinqubo ezinempilo, futhi usebenzise amapulatifomu angasiza. Sebenzisa ubuchwepheshe obusiza ukuthi ugxile ngoba ngingumuntu wezobuchwepheshe, ngizoqala ngalokho. Angiqiniseki ukuthi ngenzenjani ngaphandle kweBrightpod, uhlelo engilusebenzisela ukubeka phambili imisebenzi, ukuhlanganisa imisebenzi ibe mlando, nokugcina amaklayenti ami azi ngenqubekela phambili
Isikhathi Sokumisa Ukusabalalisa Okuzenzakalelayo kwe-SEO
NgoLwesine, Novemba 20, 2014 NgoLwesine, Novemba 20, 2014 Douglas Karr
Enye yezinsizakalo esihlinzeka ngamakhasimende ethu ukuqapha ikhwalithi yama-backlinks kusayithi lawo. Njengoba iGoogle ikhombe izizinda ngenkuthalo ngezixhumanisi ezivela emithonjeni enenkinga, sibone amakhasimende amaningi elwa - ikakhulukazi labo abaqashe amafemu we-SEO esikhathini esedlule axhumanisa emuva. Ngemuva kokungavumelani nazo zonke izixhumanisi ezingabazekayo, sibone ukuthuthuka kokulinganiswa kumasayithi amaningi. Kuyinkqubo enzima lapho zonke izixhumanisi zihlolwa futhi ziqinisekiswa